At heerkulka si uu u kaydiyo baradhada aqalka
Wixii kaydinta ee baradho ah, waa in la isticmaalo tas-hiilaadka kaydinta gaarka ah - maqaasiinka, godadka, maqaasiinka. Si kastaba ha noqotee, kaydinta noocan oo kale ah ma aha mid mar walba la heli karo, markaa mararka qaarkood waa inaad kaydisaa khudrado waxtar leh oo ku yaal guri dabaq ah oo caadi ah. Aynu ogaanno sida loo kaydiyo baradho xaaladahan. Isu diyaarinta beergooyska for wareer Si aad si guul leh u badbaadiso dalagga baradho ah, waa in marka hore la qalajiyo.
Potato Sante: sharaxaadda iyo beerista
Beerashada baradho waa geedi socodka caddaaladda ee caadiga ah ee beerta casriga ah. Abaalmarinta ugu weyn ee xirfad-fudud ee noocan oo kale ah waa barxadho, casiir leh, baraf badan, kaas oo ku raaxaysanaya suxuunta. Ma aha qarsoodi qof kasta oo ka mid ah aagga noo cagaaran, ka dib markii caan ku ah isticmaalka cuntada, waxay ku dhowaad noqotaa mid la mid ah kibista.
Xaalad degdeg ah: noocyo baradhada barafka ah
Muddo dheer, baradhadu waxay noqotey hogaamiye khudradeed oo loo isticmaalo in lagu diyaariyo suxuuno kala duwan. Xitaa waa ay adag tahay in la qiyaaso in markii awoowayaasheen ay maqnayd isaga la'aantiis. Maanta, waxaa jira noocyo badan oo baradho ah oo la koray meel kasta oo aan lahayn oo keliya sifooyinka dhadhanka gaarka ah, laakiin sidoo kale waxay u muuqdaan kala duwan.
Kala duwan ee ugu da'da: Baradhada Lorch
Barandhada koritaanka lama magacaabi karo hawl fudud, laakiin inkastoo ay taasi jirto, way adag tahay in la qiyaaso beerta khudradda ah iyada oo aan lahayn. Muddo ka dib, noocyo kala duwan oo aan la hilmaamin baradho "Lorch" ayaa mar kale helaya caan ka mid ah beerta. Sidaa daraadeed, waxaan sii wadi doonnaa sharaxaadda, astaamaha iyo astaamaha beerashada.
Kala duwanaanshaha ukunta ee Timo Timo
Hooyo kasta waxay ku farxi doontaa baradhada delicious ee aan madoobayn ka dib karinta. Oo haddii ay weli u adkaysata cudurada iyo leedahay xilli gaaban sii kordhaya, ka dibna wax qiimo ah ma leh. Tani waa baradhada "Timo Hankian". Maqaalkan ayaa ka wada hadli doona noocyada kala duwan. Sharaxaad Tilmaanta noocyada kala duwan ayaa loo yaqaan dad badan oo deggan xaafadda iyo beerta.
Kala duwanaanshaha baradhada Dutch-ka Impala
Baradhadu waxay leeyihiin muddo dheer waxayna u qalmaan inay ku noolaadaan meel sharaf leh oo ku jirta cuntada. Bannaanka u badan ma laha fikrad ah sida loo sameeyo iyada oo aan beeritaanka dalagga this on their gaar ah. Kala duwan noocyo kala duwan waa mid cajiib ah, mid kasta oo ka mid ah, waqti isku mid ah, waa mid cajiib ah. Sidaa darteed, dhibaatooyinka soo baxa, kuwaas oo iyaga ah waa in la siiyaa mudnaanta si ay u gaaraan wax wanaagsan oo aan lahayn dhibaatooyin gaar ah iyo si aad u hesho alaab tayo sare leh ee soo saaraha.
Ma kareyn karaa baradhada qaboojiyaha
By habka lagu keydiyo, waxaa suurtogal ah in loo diyaariyo mustaqbalka tiro badan oo kala duwan, labadaba dhirta iyo xayawaanka. Oo xaqiiqda ah in marti-galiyayaashu ay go'aansadaan inay barafoobaan baradho, ma jiraan wax qariib ah. Sidan oo kale, waxaad si weyn u wanaajin kartaa wakhti aad ku karineyso maalin kasta. Laakiin si aad u hesho badeecadan si ay u haystaan ​​dhadhanka iyo tayada caafimaad, waa lagama maarmaan in si sax ah loo diyaariyo.
Potato Uladar: sifooyinka kala duwan iyo sifeynta beeraha
Bannaanka u sii kordhaya doorasho hore ee baradho leh dhalidda sare leh ee beeritaanka at cariishyada xagaaga. Marka loo eego dib u eegista, darajada "Uladar" waxaa loola jeedaa taas. Dheeraad ah ayaan si faahfaahsan uga sheegi doonaa sifooyinka iyo faa'iidooyinka. Qeexida iyo astaamaha noocyada kala duwan Kala duwanaanta baradho waxay ku taal beeraha kuwo badan, waxaanad ku mahadsan tahay dadaalka beeralayda Belarusiyaanka ah ee soo saaray billowgii qarniga.
Baradhada "Picasso": sharaxaadda iyo beerista
Baradhadu waa geedo culus oo ka mid ah qoyska Solanaceae. Wadanka - Koonfurta Ameerika. Nooca qalalan ee noocan oo kale ahi ma gudbin karo heerka caan ah ee dhammaan waxyaabaha aad ugu jeceshahay. Tusaale ahaan, Belarus, waxay si toos ah ula xiriirtaa tuberkan cajiibka ah. Baradhadu waxaa la beeray boqolaal sanadood, sidaa darteed waxaa jira tiro badan oo kala duwan.
Guryaha waxtarka leh, sharaxaadda dhirta iyo daaweynta ubaxyada baradhada
Baradhadu waa khudradda ugu caansan ee caanka ah: waxaa laga yaabaa inaysan jirin qof sidaasi aan waligeed cunin suxuunta baradhada ee noloshiisa. Haa, iyo beerista ee khudradda waa mid ka mid ah meelaha ugu horeeya - waxay ku koraa inta badan beerta kasta. Waxay u egtahay in caan ka mid ah baradhada si fudud loo sharraxay, laakiin dad aad u yar ayaa ogyihiin in ku saleysan ubaxyada dalagga xididgani aad sameyn kartid tinctures cajiib ah.
Niyadjab kasta oo beerta ka mid ah goosashada qani ku ah iyo wax kasta oo ay u koraan. Dhulidda, bacriminta, xakamaynta cayayaanka - dhammaanteed, shaki la'aan, waxay saameyn wanaagsan ku yeelanaysaa natiijada. Si kastaba ha noqotee, haddii aad qalad bilowdo bilowgii, geeddi-socodka oo dhan ayaa hoos u dhigi doona godka. Saqashada sariiraha waqti aan fiicneyn, waxaad halis ugu jirtaa inaad ka tagto iyada oo aanad khudraddaada u dhigmin jiilaalka.
Haddii baradho cagaaran la cuni karo: calaamadaha sumowga iyo caawimaadda
Dhamaanteen waan ognahay in baradho ay ku jiraan kaalinta labaad (ka dib roodhiga) liiska cuntooyinka badanaaba laga helo cuntada. Waxay ku dhex jirtaa dhammaan cuntooyinka. Laakiin waxaa jira marar marka khudradda cagaaran aysan ahayn oo kaliya caafimaad qabin, laakiin sidoo kale khatar ah. Tani waa baradho cagaaran oo leh walxo waxyeelo leh, oo, marka la qaato qiyaaso badan, waxay keenaan sumayn.
Kala duwanaanshaha baradhada Rodrigo: sifooyinka, beerashada agrotechnology
Baradhada Rodrigo waa noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah oo ujeedada miiska, kaas oo helay sumcaddiisa sababtoo ah wax-soosaarka sarreeya, isbedel deg-deg ah oo ku yimid xaaladaha cimilada iyo geedi-socodka beerashada fudud. Kala duwanaanshahan sidoo kale ku leeyahay baahida loo qabo bannaanka u sifooyinka wanaagsan ee dhadhanka.
Caleenta baradhada "Melody": dabeecadaha, sirta ah ee beerashada guuleysata
Inkastoo xaqiiqda ah in baradho aan hore loo jeclaan qof walba, sababtoo ah waxaa loo isticmaalay khaldan, maanta waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu jecel dadka badan. Tan iyo iyada oo saldhig u ah ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale suxuunta caafimaad leh waa la diyaariyaa. Tixgeli mid ka mid ah wakiilada kala duwan ee noocaan ah, taas oo lagu helay natiijada shaqada ee jilayaasha.
Aad u ballaaran, noocyo barafka hore iyo bartamihii hore
Maanta waxaa jira qiyaastii shan kun oo nooc oo baradho ah, sanad walbana waa ay korayaan. Fikradda ugu weyn ee u bannaanka u keeno baradho hore. Beerta qaar ka mid ah waxay leeyihiin wakhti hal xilli ah inay ka soo ururaan sariiraha laba dalag oo khudraddan ah sababtoo ah noocyo Bisaylkiisa hore. Halkaas, baradho hore waxay leeyihiin waqti si ay u bislaadaan oo ay goostaan ​​ka hor inta ay saameyn ku yeelanayaan dillaac.
Baradhada "Lasok": dabeecadaha, beerashada agrotechnology
Baradhada "Lasok" ayaa la jarjaray rubuc qarni ka hor. In kasta oo xaqiiqda ah in inta lagu jiro waqtigan ay jiraan dad badan oo ka soo horjeeda, kuwa kala duwan ayaa ku guuleystay inay helaan horyaalka "classic". Sababta ah guusha joogtada ah waa joogitaanka tiro badan oo faa'iido leh, ugu weyn ee taas oo ah dhadhan weyn. Haddii aad doorato baradhada beertaada khudradeed, ka dibna waa inaad barataa naftaada "Lasock".
Beeraha baradho "Beerleeyaha": sifooyinka, siraha ee beerashada guuleysiga leh
Noocyo casri ah oo tayo sare leh oo baradho ah ayaa ah xaaladda ugu weyn ee soo go'aaminta wax-soosaarka sare ee dhaqanka, iyada oo aan loo eegin astaamaha cimilada ee gobolka. Mid ka mid ah noocyadaas khudradda waa noocyada baradho beereedka. Waxay bixisaa goosashada qani ku ah, sidoo kale waxay awood u leedahay in ay la yaabto qof kasta oo leh sifooyinka jilicsan.
Baradhada Miraha: Guryaha waxtarka leh
Waxaa loo yaqaan 'vitelot', haween madow, 'truffle chinese' iyo baradhada truffle baradhada Faransiiska. Digriiga yaryar leh qashir khafiif ah oo miir ah iyo maqaarka madow ee ku dhow digaaga ayaa aad loo qiimeeyaa karinta sababtoo ah dhadhanka nafaqada leh iyo ilaalinta midabka aan caadiga ahayn kadib daaweynta kulaylka. Cunnooyin badan oo dunida ka mid ah, khudraddan waxaa loo tixgeliyaa cunto.
Qaar ka mid ah baradhada "Aladdin"
Caleenta baradhada "Aladin" waxay caan ku tahay beeraleyda sababtoo ah dhadhankiisa aadka u wanaagsan iyo dhibaatooyin la'aanta beerashada. Qodobkan waxaad ku sharaxi doontaa sharaxaadda iyo astaamaha noocyada kala duwan, iyo sidoo kale dhammaan waxyaabaha ka mid ah waxyaabaha ay ka mid yihiin beerashada iyo kaydinta. Baradho-beereedka "Aladdin" waxaa lagu dhaliyey qoryaha Dutch-ka waxayna kala duwan yihiin noocyo kala duwan.
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, baradhadu waa "rootiga labaad" waxaana jira miis kasta oo ku dhow. Inkastoo xaqiiqda ah in la koray sanado badan, haddana, noocyada cusub, kuwa cusub oo ka sii wanaagsan ayaa muuqda maalin kasta. Ka fikir faahfaahin dheeraad ah mid ka mid ah kuwan super-noocyada - baradho "Dareemo". Taariikhda ee taranta Breeders ka Holland ayaa si joogto ah u abuuri cusub, noocyo baradho wanaagsan oo tayo leh.